बसिला बेचेर विद्यावारिधि गरेका दुर्गमगाउँका कुष्णबहादुर भन्छन– ग्राफिन बनाउन सक्छु - Nigranitimes
होमपेज / जीवनशैली / बसिला बेचेर विद्यावारिधि गरेका दुर्गमगाउँका कुष्णबहादुर भन्छन– ग्राफिन बनाउन सक्छु
बसिला बेचेर विद्यावारिधि गरेका दुर्गमगाउँका कुष्णबहादुर भन्छन– ग्राफिन बनाउन सक्छु
शनिबार, पुष १२, २०७६ , निगरानी टाइम्स
पुस १२ गते, बिराटनगर । अध्ययनका लागि विद्यालयसम्म पुग्न विद्यार्थीले कति मेहनत गर्नुपर्छ ? निजी विद्यालयले सहजताका लागि विद्यार्थीको घरसम्म र्पुयाउन गाडी राखेका छन् ।
विद्यालयमा तिर्नुपर्ने शुल्कको चिन्ता विद्यार्थीलाई हुँदैन । सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक शिक्षा अध्ययन निशुल्क छ । तर, करिब तीन दशक अघि मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका– ४, खोरियाका कृष्णबहादुर राई (४६) ले स्कुल पुग्न गरेको संघर्षको कथा भने बेग्लै छ ।
दुर्लभ मानिने ‘नानो टेक्नोलोजी फिजिक्स’ मा दक्षिण कोरियाबाट विद्यावारिधि गरेका राईको स्कुल अध्ययन अभावमा बित्यो । अभाव कहाँसम्म थियो भने कृष्णको विद्यालयको शुल्क तिर्न बुबा कान्छा राईले जीवन गुजाराको महत्वपूर्ण औजार बसिला र छिनो बेच्नु र्पयो।
खान लाउन मुस्किल परेका कारण झापाको तोपगाछीबाट ०३८ सालमा कान्छा राई पाँच छोरासहित सुख खोज्दै कानेपोखरी–४ डासखोलाको बगर नजिकै खोरियामा आइपुगेका थिए । अति विपन्न राईको परिवारमा बिहान एकछाक टारे बेलुका के खाने भन्ने चिन्ता थियो । खोला कुद्ने बगरमा धान उब्जनी हुँदैनथ्यो ।
कान्छा राईले हलो, कोदालोको बिँड, जुवालगायत काठका सामाग्री बनाउथे । जंगलबाट ल्याएको काठ कुँदेर निकालेको आकृति बेच्दा आएको आम्दानी परिवारको गर्जाे टार्ने र छोराहरुको पढाइ खर्च जुटाउने माध्यम थियो ।
तोपगाछीमा कक्षा ३ सम्म पढेका कारण कृष्णले जनता निम्न माध्यमिक विद्यालय बयरबन (हाल आधारभूत) २०३४ सालमा कक्षा ३ मै भर्ना भए । कक्षा ७ सम्म त्यही पढें । कक्षा ८ देखि भने उनी जनसेवा माध्यमिक विद्यालय रमाईलोमा भर्ना भए ।
खोरिया टोलबाट जनता स्कुल नजिकै थियो । तर जनसेवाको पैदल दुरी डेढ घण्टाभन्दा बढी लाग्थ्यो । पानी पर्दा ओड्ने छाता थिएन, पिँडालुको पात ओढेर स्कुल पुग्ने गर्थे । संघर्ष गरेर पढेका उनले २०४६ सालमा ७१.७० प्रतिशत अंक ल्याएर एसएसली पास गरे ।
सेन्टर टेक्नोलोजी क्याम्पस हात्तीसारबाट २०४७–०४९ आइएस्सी गरे । महेन्द्र मोरङ कम्याम्पस विराटनगरबाट बीएस्सी गरेपछि शिक्षण क्षेत्रमा गरे । सात वर्ष पढाएर खर्च जम्मा गरेपछि भौतिक शास्त्रमा एमएस्सी गरे । विसं ०६१ देखि ०७० सालसम्म काठमाडौंका विभिन्न कलेजमा अध्यापन गरे । ०७० सालमा ‘नानो टेक्नोलोजी फिजिक्स’मा विद्यावारिधि गर्न कोरियन सरकारको बिके २१ परियोजना (ब्रेन कोरिया २०२१) अन्तरगत छात्रवृद्धि प्राप्त गरे ।
साढे चार वर्ष लगाएर उनले सुनक्यून क्वाङ विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरे । उनले पढेको विश्वविद्यालय विश्वको चर्चित १०० भित्र पर्छ । कोरियाबाट फर्किएपछि उनी हाल पाटन क्याम्पसमा र युनाइटेड एकेडेमीमा अध्यापनरत छन् ।
पैसा नहुँदा जाँच रोकियो, बसिला बेच्दा गाँस !
विसं ०३४ सालमा कृष्ण कक्षा ३ मा भर्ना हुँदा उनका दाजु ऋषि कक्षा ४ मा पढ्थे । बार्षिक जाँच फी डेढ रुपैयाँ थियो । तर, परीक्षा नजिकिँदै गर्दा ऋषिको फी तिर्न बुबाले सकेनन् । स्कुलले उनको परीक्षा रोकिदियो । गाउँमा ऋण खोजेर बुबाले शुल्क तिरेपछि बल्ल परीक्षा दिन पाए ।
निरक्षर भए पनि कान्छा राई छोराछोरीको पढाइप्रति सचेत थिए । उनको जोड खानामा भन्दा छोराछोरीको पढाइमा थियो । गर्जाे टार्नका लागि जंगलबाट काठ लगेर हलो–कोदालोको बिँड बनाउथे । तर, उनले बनाएको सामाग्री सबै बिक्दैनथ्यो । ‘बुबासँग म र दाजु पनि फरुवाको बिँड, हलो बेच्न दोमाना बजार जान्थ्यौं’ कृष्ण सम्झन्छन् ‘फरुवाको बिँडलाई ५० पैसा पनि दिँदैनथे, सित्तैमा माग्थे ।’
२०४३ सालको बार्षिक परीक्षा नजिकिँदै थियो । परीक्षा अघि जाँच फी नतिरे परीक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने । राई परिवारसँग पैसा थिएन । सापटी खोज्दा पाएनन् । अन्ततः दुई छोराको परीक्षाका लागि कान्छाले आम्दानीको स्रोत बसिला र छिनो बेच्न थाले । बसिला बेचेपछि उनको सहयोगी बञ्चरो बन्यो । बञ्चरोको सहायताले घर नजिकैको जंगलबाट काठ ल्याएर कडी, बिम बनाएर बेञ्न थाले ।
कृष्ण र ऋषि दुबै पढाइमा तेज भएका कारण स्कुलहरुले बेला–बेलामा फी छुट गरिदिन्थे ।त्यसपछि कक्षा ९ देखि विद्यावारिधिसम्म छात्रावृद्धिमै पढेको कृष्ण बताउँछन् । ‘पढाइमा अलि जान्ने भएका कारण धेरै फी तिर्नु परेन’ राई भन्छन् ‘पीएचडी पनि स्कलरसिपमै गरें ।’
निरक्षर आमाको शिक्षा चेत
खोरिया टोलनजिकै बयरवनमा भट्टराई र निरौलाको बिर्ता थियो । गाउँका उमेर पुगेका धेरै साहुकहाँ काम गर्न बस्थे । तर, कान्छा राईले छोराहरुलाई कतै काममा राखेनन् । एक छाक नखाई भए पनि बुबाआमाले स्कुल जा भन्नुहुन्थो’ कृष्ण सम्झन्छन् ‘पढाइ बाहेक दायाँ–बायाँ सोच्न दिनुभएन ।’
बुबाआमाकै कारण कृष्णले अहिले नामका अगाडि डाक्टर लेख्न पाएका छन् । कृष्णको नामका अगाडि लेखिने ‘डाक्टर’ शब्दले सबैभन्दा खुसी बुबा कान्छा राईलाई दिएको छ । बगरमा घर भएका कारण तरकारी बारी थिएन । विपन्नताका कारण तरकारी किन्न सक्ने आर्थिक हैसियत पनि थिएन । ‘घरमा तरकारी हुँदैनथ्यो, हामी भात बसाएर माछा मार्न खोलातिर कुद्थ्यौं’ राई भन्छन् ‘डाँसखोलामा माछा प्रशस्त पाइन्थे ।’
कक्षा ७ मा पढ्दादेखि चप्पल लगाउन सुरु गरेका राईले स्कुलको खर्च जुुटाउन सखुवाको फूल भेला गरेर पनि बिक्री गरेको स्मरण गर्छन् । ‘मेरो बुझाइमा प्रकृतिको नजिक भएको मान्छे भोकै मर्दैन ।’ उनी भन्छन् ‘हामीलाई बचाएकै खोला र घरनजिकैको जंगलले हो ।’
नेपालमा ग्राफिनको सम्भावना
चारवर्ष कोरियामा अध्ययन गरेका राई सिलिकनलाई प्रतिस्थापन गर्न तिब्ररुपमा विस्तार हुँदै गरेको ‘ग्राफिन’ उत्पादन गर्न सके नेपालले लाभ लिन सक्ने बताउँछन् । प्रविधिको सहजताका लागि सिलिकनको प्रयोग तिब्र छ । तर, पछिल्लो समय सिलिकनलाई विस्थापन गर्न ‘ग्राफिन’ को प्रयोग बढ्दै गएको छ । विश्व बजारमा ग्राफिनको माग उच्च रहेको उनको भनाइ छ ।
कोरियन मोबाइल निर्माता कम्पनी सामसुङले सिलिकनको स्थानमा ग्राफिनको प्रयोग गर्न थालेको छ । कोरियामा अध्ययन गर्न राईले ग्राफिन निर्माणको काम गरेका थिए । विश्व बजारमा ग्राफिनको माग उच्च रहेको उनको भनाइ छ ।‘अबको टेक्नोलोजी ग्राफिन नै हो,’ राई भन्छन् ‘राज्यले योगदान गर्छ भने म ग्राफिन बनाउन सक्छु ।’
राईका अनुसार नेपालमा ग्राफिन पाउनै मुस्किल पर्छ । राईले अहिले तीनजना विद्यार्थीलाई ग्राफिनमा नै थेसिस गराइरहेका छन् । तर, ६ महिनादेखि खोजी गर्दा ग्राफिन कतै नपाइएको उनले बताए ।
ग्राफिन भनेको कार्बनको प्रणालीको एकल लेयर हो । यसको प्रयोगले हामी केही मिनेटमै मोबाइल फोन र ट्याब्लेट कम्प्युटरहरु चार्ज गर्न सक्छौं । ग्राफिनलाई इलेक्ट्रिक जगतको ‘गेम चेञ्जर’ मानिन्छ । ग्राफिन ‘आइसी’, ट्रान्जेस्टरलगायत मोबाइलसहितका इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसमा प्रयोग हुन्छ । अनलाइन खबरबाट
जन्मदिनमा जेष्ठ नागरिकलाई खिर
ओरेक नेपालद्धारा कानेपोखरीमा युवा समूह गठन